Jọn Nke Mbụ 2:1-29
Jizọs bụ àjà a chụrụ ka anyị na Chineke dị n’udo (1, 2)
Na-eme ihe ndị o nyere n’iwu (3-11)
Iwu ochie na iwu ọhụrụ (7, 8)
Ihe mere Jọn ji dee akwụkwọ a (12-14)
Unu ahụla ụwa n’anya (15-17)
Jọn dọrọ aka ná ntị banyere onye na-emegide Kraịst (18-29)
2 Ụmụntakịrị m, m na-edere unu ihe ndị a ka unu ghara ime mmehie. Ma, ọ bụrụ na onye ọ bụla emee mmehie, anyị nwere onye na-enyere anyị aka, onye ya na Nna anyị nọ, ya bụ, Jizọs Kraịst,+ onye ezi omume.+ 2 Ọ bụ àjà a chụrụ maka mmehie anyị+ ka anyị na Chineke wee dị n’udo,+ ma ọ bụghị naanị maka mmehie anyị, kama ọ bụkwa maka mmehie ụwa niile.+ 3 Ọ bụrụ na anyị ana-eme ihe ndị o nyere n’iwu, anyị ga-eji ya mara na anyị amatala ya. 4 Onye na-asị: “Amatala m ya,” ma ọ naghị eme ihe ndị o nyere n’iwu bụ onye ụgha, eziokwu adịghịkwa ya n’ime. 5 Ma ọ bụrụ na mmadụ na-eme ihe o kwuru, ọ ga-edo anya na onye ahụ hụrụ Chineke n’anya n’eziokwu.+ Ọ bụrụ na anyị ana-eme ihe a, anyị ga-amata na anyị na ya dị n’otu.+ 6 Onye na-asị na ya na ya dị n’otu kwesịrị ịna-ebi ndụ otú onye ahụ biri.*+ 7 Ndị m hụrụ n’anya, ihe m na-edere unu abụghị iwu ọhụrụ, kama ọ bụ iwu ochie unu nụrụ ná mmalite.+ Iwu ochie a bụ okwu ahụ unu nụrụ. 8 M na-edekwara unu iwu ọhụrụ, bụ́ iwu o debere, nke ununwa debekwara, n’ihi na ọchịchịrị alawala, ezigbo ìhè amalitela inwu.+ 9 Onye na-asị na ya nọ n’ìhè, ma ya akpọọ nwanna ya asị+ ka nọ n’ọchịchịrị.+ 10 Onye hụrụ nwanna ya n’anya nọsiri ike n’ìhè,+ e nweghịkwa ihe ga-eme ka o mehie.* 11 Ma onye kpọrọ nwanna ya asị nọ n’ọchịchịrị, ọ na-ejekwa ije n’ọchịchịrị,+ ọ maghịkwa ebe ọ na-aga,+ n’ihi na ọchịchịrị emeela ka o kpuo ìsì. 12 Ụmụntakịrị, m na-edere unu ihe a n’ihi na a gbagharala unu mmehie unu n’ihi aha ya.+ 13 Ndị bụ́ nna, m na-edere unu ihe a n’ihi na unu amatala onye ahụ si ná mmalite dịrị. Ụmụ okorobịa, m na-edere unu ihe a n’ihi na unu emeriela ajọ onye ahụ.+ Ụmụntakịrị, m na-edere unu ihe a n’ihi na unu amatala Nna anyị.+ 14 Ndị bụ́ nna, m na-edere unu ihe a n’ihi na unu amatala onye ahụ si ná mmalite dịrị. Ụmụ okorobịa, m na-edere unu ihe a n’ihi na unu siri ike,+ okwu Chineke dịkwa n’ime unu,+ unu emeriekwala ajọ onye ahụ.+ 15 Unu ahụla ụwa ma ọ bụ ihe ndị dị n’ụwa n’anya.+ Ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ ụwa n’anya, ịhụnanya Nna anyị adịghị ya n’ime;+ 16 n’ihi na ihe niile dị n’ụwa, ya bụ, ihe na-agụ anụ ahụ́ agụụ+ na ihe na-agụ anya agụụ+ na mmadụ igosi ihe ndị o nwere,* esighị n’ebe Nna anyị nọ, kama o si n’ụwa. 17 Ụwa na-agafe agafe, ya na ihe na-agụ ya agụụ,+ ma onye na-eme uche Chineke ga-anọgide ruo mgbe ebighị ebi.+ 18 Ụmụntakịrị, ihe a bụ awa ikpeazụ. Unu nụrụ na onye na-emegide Kraịst na-abịa.+ E nweedịla ọtụtụ ndị na-emegide Kraịst ugbu a.+ Ọ bụ ya mere anyị ji mara na ihe a bụ awa ikpeazụ. 19 Ha si n’ebe anyị nọ pụọ, ma anyị na ha abụghị otu;+ n’ihi na a sị na anyị na ha bụ otu, ha gaara eso anyị nọrọ. Ma ha pụrụ ka e wee gosi na anyị na mmadụ niile abụghị otu.+ 20 Onye nsọ ahụ tekwara unu mmanụ,+ unu niile makwa ihe. 21 M na-edere unu ihe a, ọ bụghị maka na unu amaghị eziokwu,+ kama ọ bụ maka na unu ma ya, nakwa maka na e nweghị okwu ụgha na-esi n’eziokwu apụta.+ 22 Ọ̀ bụ na ọ bụghị onye na-asị na Jizọs abụghị Kraịst bụ onye ụgha?+ Ọ bụ ya bụ onye na-emegide Kraịst,+ onye na-agọnahụ Nna anyị na Ọkpara ya. 23 Onye ọ bụla nke na-agọnahụ Ọkpara ahụ, ya na Nna anyị adịghị n’otu.+ Ma, onye ọ bụla nke na-ekwupụta na ya kweere n’Ọkpara ahụ,+ ya na Nna anyị dịkwa n’otu.+ 24 Ma ununwa, ka ihe unu nụrụ ná mmalite dịgide n’ime unu.+ Ọ bụrụ na ihe unu nụrụ ná mmalite adịgide n’ime unu, unu na Ọkpara ahụ ga na-adị n’otu, unu na Nna anyị ga na-adịkwa n’otu. 25 Ihe a bụkwa ihe o kwere anyị ná nkwa, ya bụ, ndụ ebighị ebi.+ 26 M na-edere unu ihe ndị a banyere ndị na-agbalị ka ha duhie unu. 27 Ma ununwa, mmụọ nsọ o ji tee unu mmanụ+ ka dị n’ime unu, ọ dịghịkwa unu mkpa ka onye ọ bụla na-akụziri unu ihe. Ma mmụọ ahụ o ji tee unu mmanụ na-akụziri unu ihe niile,+ ọ bụkwa eziokwu, ọ bụghị ụgha. Unu na ya dịrị n’otu+ otú mmụọ ahụ kụziiri unu. 28 N’ihi ya, ụmụntakịrị, unu na ya dịrị n’otu, ka anyị wee jiri obi ike kwuo okwu+ mgbe a ga-eme ka ọ pụta ìhè, gharakwa ikwe ka ihere mee ka anyị hapụ ya n’oge ọnụnọ ya. 29 Ọ bụrụ na unu ma na ọ bụ onye ezi omume, unu makwa na onye ọ bụla na-eme ezi omume bụ nwa ya.+
^ Na Grik, “ije ije otú onye ahụ jere.”
^ Na Grik, “ọ daa.”
^ Ma ọ bụ “mmadụ iji ihe ndị o nwere etu ọnụ.”